သားသမီးကို ချုပ်ချယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်များ - For her Myanmar
စိုးရိမ်လို့ ဆိုပေမဲ့ အရမ်းချုပ်ချယ်မိတဲ့အခါမှာ…
မိဘတိုင်း သားသမီးကို ချစ်ကြမယ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့တော့ ချစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ချစ်ရာ မရောက်ဘဲ နှစ်ရာ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးကို “ချစ်လွန်းလို့ ” ဆိုပြီး နေရာတကာ ချုပ်ချယ်တာ၊ အလွန်အကျွံ အုပ်ထိန်းတာလည်း ချစ်ရာ မရောက်ဘဲ နှစ်ရာရောက်နေတဲ့ အပြုအမူတွေထဲက တစ်ခုပါ ယောင်းတို့ရေ… သားသမီးတွေကို အလွန်အကျွံ ချုပ်ချယ်၊အုပ်ထိန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့….
(၁) ကလေးကို စိတ်ပင်ပန်း မွန်းကျပ်စေတယ်။
ကလေးရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဝါသနာကို မမေးမြန်းဘဲ အတန်းထဲ ထိပ်ရောက်စေလိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တတစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး ကလေးကို အတင်းတွန်းနေတဲ့ မိဘမျိုးတွေရှိပါတယ်။ နားချိန် ဆော့ချိန်လေးတောင် မပေးဘဲ ကလေးကို ကျူရှင်၊ဂိုက်၊ သင်တန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပို့ပြီး ဖိအားပေးတဲ့ မိဘမျိုးပေါ့။
လေ့လာချက်တွေအရ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ ကျူရှင်တွေ အများကြီး ပို့ပေမဲ့ သူ့မှာ စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာလိုစိတ်(passion) သာ မရှိရင် အဲဒီကလေးဟာ ပိုမတော်သွားပါဘူး။ ကလေးအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းမွန်းကျပ်လာတာ နဲ့ မိဘအနေနဲ့ အကြောင်းမဲ့ ငွေအကုန်အကျများတာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာပေးရရင် တယောထိုး ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်လိုတဲ့ ကလေးကို သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာ အမှတ်များဖို့ ဖိအားမပေးသင့်တာမျိုးပေါ့။
(၂) သဘာဝလောကကြီးကနေ သင်ယူတတ်မြောက်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည် မရှိတော့ဘူး။
သားသမီးကို ဘေးတွေ့မှာစိုးတာနဲ့ပဲ အလွန်အကျွံ ကာစီးတတ်တဲ့ (over-protective) မိဘတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို မိဘတွေဟာ သားသမီးကို တစ်ချိန်လုံး မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေတတ်ပြီး သူတို့မပါရင် ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ခရီးကိုမှ ပေးမသွားတတ်ကြပါဘူး။ ကျောင်း၊ အိမ်၊ အလုပ် ဒီ(၃)နေရာသာ ပေးသွားပြီး တခြားဘာမှ ပေးမလုပ်တတ်ကြပါဘူး။
ကြာလာရင် ကလေးဟာ လောကကြီးရဲ့ “ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စနစ်” (self-help system) ကို နားမလည်နိုင်တော့ဘဲ မိဘကိုပဲ အရမ်းအားကိုးလာပါလိမ့်မယ်။ “ကိုယ်ဖြစ်ရင် ကိုယ်ခံ”ရတဲ့ သဘာဝတရားကြီးကနေ ဘဝနေနည်းတွေကို မသင်ယူနိုင်တော့ပါဘူး။
Related Article >>> ကလေးကို ရိုက်နှက် ဆုံးမခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ
(၃) လူမှုဆက်ဆံရေး အားနည်းလာပါလိမ့်မယ်။
ဟိုလည်း မသွားရ၊ ဒီလည်း မသွားရ တားမြစ်နေတတ်တာမို့ ကလေးမှာ လူတွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ဆုံဆက်ဆံချိန် မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး အားနည်းတာ၊ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေ ရှာဖွေတတ်ပြီး လူမှုကွန်ရက် ချဲ့ထွင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လူတွေအကြောင်း နားလည်ပြီး ဘဝမှာ လည်လည်ဝယ်ဝယ် ကျင်လည်နိုင်ဖို့ဆို သားသမီးကို လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့်၊ တွေ့ဆုံဆက်ဆံခွင့် ပေးသင့်ပါတယ်နော်။
(၄) တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး။
ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ အသစ်အဆန်းတွေကို တီထွင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ဆို မိဘတွေဟာ သားသမီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်၊အကောင်အထည်ဖော်ခွင့် ပေးရပါမယ်။
ဒါပေမဲ့ ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ မိဘတွေဟာ ကလေးကို လမ်းမှားရောက်မှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ ကလေးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ခွင့် မပေးတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေ၊ ကိုယ် သဘောကျတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပဲ ကလေးကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ထိုးဖောက်စဉ်းစားနိုင်စွမ်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း နည်းပါးသွားပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ၊ ဆိုးပြစ်တွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် သင်ယူသွားတတ်တာမို့ ယောင်းတို့အနေနဲ့ အရမ်းကြီး စိတ်ပူတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
(၅) အမှားတွေကို ကြောက်တတ်လာမယ်။
လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့ မကင်းကြသလို အမှားတွေဟာ အမှန်တွေကို သင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးအရာပါ။ မှားဖူးတာ များလေ၊ မှန်တာတွေကို ပိုရှာတွေ့လာလေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ မိဘတွေကတော့ သားသမီးကို အမှားလုပ်ခွင့် မပေးဘဲ လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ လိုက်လံချုပ်ချယ်တတ်ကြပါတယ်။ အမှားလုပ်မိတိုင်းလည်း ကလေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြစ်တင်ဝေဖန်တတ်ကြပါတယ်။
အကျိုးဆက်ကတော့ ကလေးဟာ အမှားတွေကို မလုပ်ရဲတော့တာကြောင့် ၊ အမှားတွေကို ကြောက်လာတာကြောင့် အမှန်တွေနဲ့ ဝေးကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာ မှားလဲ မှန်လဲ သူကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်၊ ဆုံးဖြတ်တာမျိုး မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဖြစ်သင့်တာကတော့ “သားသမီးကို အမှား မလုပ်လာနဲ့နော်” လို့ ဖိအားပေး ကြိမ်းဝါးမယ့်အစား “မှားတာရှက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ အမှားကို သိပြီး အမှန်ကို သင်ယူတတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်နော်” လို့ ဆုံးမ သင့်တာပါ။
Related Article >>> ဘာကြောင့်များ ကလေးရှေ့မှာ မိဘနှစ်ပါး ရန်မဖြစ်သင့်တာလဲ
(၆) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမယ်
ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ မိဘတွေနဲ့ နေရတဲ့အခါ ကလေးဟာ တခြားကလေးတွေလောက် မလွတ်လပ်၊ မပျော်ရွှင်ရတဲ့ သူ့ဘဝကို ကြည့်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု လျော့နည်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း မဖြစ်တဲ့အခါ ကြိမ်းဝါး၊ ဖိအားပေးတတ်တဲ့ မိဘတွေကြောင့် ကလေးမှာ မပျော်ရွှင်တော့တာ၊ စိတ်ပူပန်လွန်တတ်တာလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သားသမီးရဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို အလေးမထားဘဲ ချုပ်ချယ်နေမယ်ဆိုရင် ကြာရင် မိဘနဲ့ ကလေးဟာ စိတ်ချင်း ဝေးကွာသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ချုပ်ချယ်တာဟာ မိဘအတွက်ရော သားသမီးအတွက်ပါ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ သားသမီးကို ဘယ်အရာမဆို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီး တွေးခေါ်၊ လုပ်ဆောင်၊ သင်ယူစေတာသာ သင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
Reference links: Very Well Family Apacenter
စိုးရိမျလို့ ဆိုပမေဲ့ အရမျးခြုပျခယျြမိတဲ့အခါမှာ…
မိဘတိုငျး သားသမီးကို ခဈြကွမယျဆိုတာ ယုံမှားသံသယဖွဈဖှယျ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မှနျကနျတဲ့ နညျးလမျးနဲ့တော့ ခဈြဖို့ လိုပါတယျ။ မဟုတျရငျ ခဈြရာ မရောကျဘဲ နှဈရာ ရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ သားသမီးကို “ခဈြလှနျးလို့ ” ဆိုပွီး နရောတကာ ခြုပျခယျြတာ၊ အလှနျအကြှံ အုပျထိနျးတာလညျး ခဈြရာ မရောကျဘဲ နှဈရာရောကျနတေဲ့ အပွုအမူတှထေဲက တဈခုပါ ယောငျးတို့ရေ… သားသမီးတှကေို အလှနျအကြှံ ခြုပျခယျြ၊အုပျထိနျးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှကေတော့….
(၁) ကလေးကို စိတျပငျပနျး မှနျးကပျြစတေယျ။
ကလေးရဲ့ ဆန်ဒနဲ့ ဝါသနာကို မမေးမွနျးဘဲ အတနျးထဲ ထိပျရောကျစလေိုတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အတ်တတဈခုတညျးကို ကွညျ့ပွီး ကလေးကို အတငျးတှနျးနတေဲ့ မိဘမြိုးတှရှေိပါတယျ။ နားခြိနျ ဆော့ခြိနျလေးတောငျ မပေးဘဲ ကလေးကို ကြူရှငျ၊ဂိုကျ၊ သငျတနျးတှေ တဈခုပွီးတဈခု ပို့ပွီး ဖိအားပေးတဲ့ မိဘမြိုးပေါ့။
လလေ့ာခကျြတှအေရ ဘာသာရပျဆိုငျရာ သငျတနျး၊ကြူရှငျတှေ အမြားကွီး ပို့ပမေဲ့ သူ့မှာ စိတျအားထကျသနျစှာ လလေ့ာလိုစိတျ(passion) သာ မရှိရငျ အဲဒီကလေးဟာ ပိုမတျောသှားပါဘူး။ ကလေးအတှကျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပငျပနျးမှနျးကပျြလာတာ နဲ့ မိဘအနနေဲ့ အကွောငျးမဲ့ ငှအေကုနျအကမြားတာပဲ အဖတျတငျပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာပေးရရငျ တယောထိုး ကြှမျးကငျြသူ ဖွဈလိုတဲ့ ကလေးကို သိပ်ပံဘာသာရပျတှမှော အမှတျမြားဖို့ ဖိအားမပေးသငျ့တာမြိုးပေါ့။
(၂) သဘာဝလောကကွီးကနေ သငျယူတတျမွောကျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျ မရှိတော့ဘူး။
သားသမီးကို ဘေးတှမှေ့ာစိုးတာနဲ့ပဲ အလှနျအကြှံ ကာစီးတတျတဲ့ (over-protective) မိဘတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလို မိဘတှဟော သားသမီးကို တဈခြိနျလုံး မကျြစိဒေါကျထောကျကွညျ့နတေတျပွီး သူတို့မပါရငျ ဘယျနရော၊ ဘယျခရီးကိုမှ ပေးမသှားတတျကွပါဘူး။ ကြောငျး၊ အိမျ၊ အလုပျ ဒီ(၃)နရောသာ ပေးသှားပွီး တခွားဘာမှ ပေးမလုပျတတျကွပါဘူး။
ကွာလာရငျ ကလေးဟာ လောကကွီးရဲ့ “ကိုယျထူ ကိုယျထ စနဈ” (self-help system) ကို နားမလညျနိုငျတော့ဘဲ မိဘကိုပဲ အရမျးအားကိုးလာပါလိမျ့မယျ။ “ကိုယျဖွဈရငျ ကိုယျခံ”ရတဲ့ သဘာဝတရားကွီးကနေ ဘဝနနေညျးတှကေို မသငျယူနိုငျတော့ပါဘူး။
Related Article >>> ကလေးကို ရိုကျနှကျ ဆုံးမခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ဆိုးကြိုးမြား
(၃) လူမှုဆကျဆံရေး အားနညျးလာပါလိမျ့မယျ။
ဟိုလညျး မသှားရ၊ ဒီလညျး မသှားရ တားမွဈနတေတျတာမို့ ကလေးမှာ လူတှနေဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ တှဆေုံ့ဆကျဆံခြိနျ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကလေးဟာ လူမှုဆကျဆံရေး အားနညျးတာ၊ အပေါငျးအသငျးမိတျဆှတှေေ ရှာဖှတေတျပွီး လူမှုကှနျရကျ ခြဲ့ထှငျနိုငျစှမျး မရှိတော့တာမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
လူတှအေကွောငျး နားလညျပွီး ဘဝမှာ လညျလညျဝယျဝယျ ကငျြလညျနိုငျဖို့ဆို သားသမီးကို လူ့အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ လှတျလှတျလပျလပျ သှားလာခှငျ့၊ တှဆေုံ့ဆကျဆံခှငျ့ ပေးသငျ့ပါတယျနျော။
(၄) တီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျး မရှိတော့ပါဘူး။
ကလေးရဲ့ ဦးနှောကျဟာ အသဈအဆနျးတှကေို တီထှငျစဉျးစားနိုငျဖို့ဆို မိဘတှဟော သားသမီးကို လှတျလှတျလပျလပျ တှေးချေါခှငျ့၊ ဆုံးဖွတျခှငျ့၊ ဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျး လုပျဆောငျ၊အကောငျအထညျဖျောခှငျ့ ပေးရပါမယျ။
ဒါပမေဲ့ ခြုပျခယျြလှနျးတဲ့ မိဘတှဟော ကလေးကို လမျးမှားရောကျမှာစိုးတယျဆိုတဲ့ အခကျြတဈခကျြတညျးနဲ့ ကလေးကို လှတျလှတျလပျလပျတှေးချေါခှငျ့ မပေးတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ အတှေးအချေါ အယူအဆတှေ၊ ကိုယျ သဘောကတြဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှနေဲ့ပဲ ကလေးကို လှမျးမိုးထားတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ ဦးနှောကျဟာ ထိုးဖောကျစဉျးစားနိုငျစှမျး၊ တီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျး နညျးပါးသှားပါလိမျ့မယျ။
ကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြကနေ ထှကျပျေါလာတဲ့ ကောငျးကြိုးတှေ၊ ဆိုးပွဈတှကေို သူတို့ ကိုယျတိုငျ သငျယူသှားတတျတာမို့ ယောငျးတို့အနနေဲ့ အရမျးကွီး စိတျပူတာမြိုး မဖွဈစခေငျြပါဘူး။
(၅) အမှားတှကေို ကွောကျတတျလာမယျ။
လူတိုငျးဟာ အမှားနဲ့ မကငျးကွသလို အမှားတှဟော အမှနျတှကေို သငျယူဖို့ အကောငျးဆုံးအရာပါ။ မှားဖူးတာ မြားလေ၊ မှနျတာတှကေို ပိုရှာတှလေ့ာလပေါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အဆိုးမွငျတတျတဲ့ မိဘတှကေတော့ သားသမီးကို အမှားလုပျခှငျ့ မပေးဘဲ လုပျရပျတိုငျးမှာ လိုကျလံခြုပျခယျြတတျကွပါတယျ။ အမှားလုပျမိတိုငျးလညျး ကလေးကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ပွဈတငျဝဖေနျတတျကွပါတယျ။
အကြိုးဆကျကတော့ ကလေးဟာ အမှားတှကေို မလုပျရဲတော့တာကွောငျ့ ၊ အမှားတှကေို ကွောကျလာတာကွောငျ့ အမှနျတှနေဲ့ ဝေးကှာသှားပါလိမျ့မယျ။ ဘယျဟာ မှားလဲ မှနျလဲ သူကိုယျတိုငျ စမျးသပျ၊ ဆုံးဖွတျတာမြိုး မလုပျနိုငျတော့ပါဘူး။
ဖွဈသငျ့တာကတော့ “သားသမီးကို အမှား မလုပျလာနဲ့နျော” လို့ ဖိအားပေး ကွိမျးဝါးမယျ့အစား “မှားတာရှကျစရာ မဟုတျဘူး။ အမှားကို သိပွီး အမှနျကို သငျယူတတျဖို့ပဲ လိုတယျနျော” လို့ ဆုံးမ သငျ့တာပါ။
Related Article >>> ဘာကွောငျ့မြား ကလေးရှမှေ့ာ မိဘနှဈပါး ရနျမဖွဈသငျ့တာလဲ
(၆) စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာတှေ ဖွဈလာမယျ
ခြုပျခယျြလှနျးတဲ့ မိဘတှနေဲ့ နရေတဲ့အခါ ကလေးဟာ တခွားကလေးတှလေောကျ မလှတျလပျ၊ မပြျောရှငျရတဲ့ သူ့ဘဝကို ကွညျ့ပွီး စိတျဓာတျကတြာ၊ မိမိကိုယျမိမိ ယုံကွညျမှု လြော့နညျးတာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ သူတို့ ဖွဈစခေငျြတဲ့အတိုငျး မဖွဈတဲ့အခါ ကွိမျးဝါး၊ ဖိအားပေးတတျတဲ့ မိဘတှကွေောငျ့ ကလေးမှာ မပြျောရှငျတော့တာ၊ စိတျပူပနျလှနျတတျတာလညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
သားသမီးရဲ့ ဆန်ဒ နဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာတှကေို အလေးမထားဘဲ ခြုပျခယျြနမေယျဆိုရငျ ကွာရငျ မိဘနဲ့ ကလေးဟာ စိတျခငျြး ဝေးကှာသှားပါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့ ခြုပျခယျြတာဟာ မိဘအတှကျရော သားသမီးအတှကျပါ မှနျကနျတဲ့ နညျးလမျးမဟုတျပါဘူး။ သားသမီးကို ဘယျအရာမဆို လှတျလပျခှငျ့ပေးပွီး တှေးချေါ၊ လုပျဆောငျ၊ သငျယူစတောသာ သငျ့တျောတဲ့ နညျးလမျးဖွဈပါတယျနျော။
Tags: children, Concern, Consequences, control, Education, Knowledge, Over, Parents
Aye Mon Kyaw December 12, 2018